Malunga nathi -Guangdong Huayuemei Izibane zeTekhnoloji Co., Ltd.
Kutheni iHuayuemei isibane
I-Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co, Ltd yasekwa ngo-2006. I-Huayuemei Lighting njenge-Professional LED Light Strip umenzi, Ingcali kuyilo, ukuvelisa kunye nokusasaza ngaphezulu kweminyaka eli-10. Nge-2,300 sqm yezixhobo zokuvelisa eGuangzhou, China.
Sinethuba elikhulu ekuyileni nasekuveliseni amava, iworkshop, ukunceda, iqela lokuthengisa.
Umgaqo: Umgangatho olungileyo kunye nexabiso lokhuphiswano, ixabiso elikhulu kubathengi.
Ingcamango yemveliso yinto efanelekileyo kakhulu, ekhangayo kunye nemveliso ebalulekileyo (ukukhanya kwe-Strip Light).
Sikwamkela ii-odolo ze-OEM kwiimfuno ezizodwa zabathengi. Siza kuhlala sigcina imveliso entsha, siphucula umgangatho wemveliso yethu kwaye siphucula iinkonzo zethu.
Sineqela elomeleleyo lokwenza iodolo yakho ngexesha elifanelekileyo, ukuhanjiswa kwabathengi ngexesha. Sikwanemigangatho engqongqo kakhulu yemveliso, qinisekisa ukuba yonke imveliso yenziwe kakuhle kuyo yonke ikhonkco lokudibanisa imveliso.
IHuayuemei ngumthengisi oqeqeshiweyo wokuKhanya kwe-Strip ye-LED ikakhulu kubandakanya ukuKhanya kwesibane se-LED, i-Module ye-LED yeModyuli ye-LED, i-Flexible / Rigid LED Strip Light, iModyuli ye-Backlight ye-LED, besisebenza ngokuKhanya kwe-LED e-China ngaphezulu kweminyaka eli-10. Sikwanokukhetha okukhethiweyo ukunceda abathengi ukuba basebenzise ubonelelo lwabo lweendlela ezahlukeneyo.
Iqela lethu lokuthengisa lizama ukwanelisa abathengi ngeenkonzo ezigqwesileyo. Ngaphezu koko, ngokusekwe kubudlelwane bethu obusondeleyo nabathengi, sinokuhlala sifumana ulwazi lokuqala kwimarike kwaye singenziwa ngokwezifiso ngokwesicelo esikhethekileyo somthengi. Ngaphezulu kweminyaka eyi-10 yokukhula, sinamava kwi-ODM nakwi-OEM. Ngemveliso yethu yepremiyamu kunye nenkonzo, simisele ubuhlakani beshishini obuhle kunye nabathengi kurhwebo lwasekhaya nakwamanye amazwe bamkelekile ngokufudumeleyo. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na into yethu okanye ufuna olunye ulwazi, pls ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Sijonge ukusebenzisana nawe kwikamva elikufutshane.
Umgangatho kunye noQinisekiso
Senza ngaphakathi endlwini ukuqinisekisa umgangatho ophezulu. Ukukhanya kwethu kwe-Strip ye-LED yi-CE, uRosh kunye ne-UL eqinisekisiweyo.
Ukulula yinto yethu yemantra. Izisombululo zethu kulula ukuzifaka, kulula ukuzikhuphela kwaye kulula ukuzilawula. Kwaye siya kuthi ngokwesicelo sakho sokwenza esona sisombululo sisiso.
Ukukhanya kweHuayuemei lishishini lokuyila eliphuhlisiweyo kunye nenkampani yorhwebo yazo zonke iimfuno zakho. Ukuyila kuqhuba kwaye kuyasikhuthaza.
Iqela lethu elingaphakathi endlwini le-R & D liphanda iintsingiselo ezintsha kwaye liphuhlise iimveliso ezintsha zecandelo.
Siziingcali kukhutshelo olukhulu enkosi kwii-2,300 sqm zethu zoncedo lokuvelisa eGuangzhou, China.
Emva kweeNkonzo zokuThengisa
Siza kubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye neyona intengiso.
Ngaphezulu kweminyaka eli-14 yamava, sinabaxhasi kumazwe angaphezu kwe-130 nakwizixeko ezingaphezu kwe-4,500.